7 Mazano Ekukudziridza Akawedzera Kudzora Unyanzvi | Mabasa - Basa - Kufamba ZOE
7 Mazano Okukudziridza Unyanzvi Hwokugadzirisa Masimba
Top 10 Linkedin Mapeji Kuti Uwane basa ku Dubai
Dai 17, 2019
Antony Raj Jayamani muteveri wedu kubva Linkedin
Dai 18, 2019
Nyaya iyi yakanyorerwa Dubai City Company neZoe Talent Solution
7 Mazano Okukudziridza fomu Yakawedzerwa Inyanzvi Yehutungamiri Zoe Talent Solution. Kana uri kutsvaga kukurudzira, tarisa a Administration Courses pamaitiro ekuvandudza kwako hunyanzvi uye wedzera mikana yako yekuwana mhedzisiro semutongi. Iyi ndiyo nzira iwe ungazviita:
1. Ziva Zvaunowana
Imwe yedzakanakisa nzira dzekubata nemuvengi nekuziva kutyisidzira kwavo kunogona. Izvi zvinoreva kuti zvakakosha kutsvaga kuti uone kuti ndedzipi shanduko dzako zvinongedzo mune izvo zvine chekuita nebasa rako uye zvakare hunyanzvi hwako hwekuita uye hwepamoyo. Iri ndiro danho rekutanga rekushanda izvi zvikanganiso zvehunyanzvi uye Kuwana mazano anoshanda kuvabvisa zvachose.
Chishandiso chikuru cheizvi kuzvionera pachako, kutaura kazhinji, icho chine kaunganidzwa kekuzviziva. Uyezve, mibvunzo iyo inobatsira kufunga nezve mhedzisiro yako uye Ziva zviri kutadzisa kufambira mberi kwako. Nekuita izvi kuzvitarisisa iwe unogona kunzwisisa zviri nani kwaunoda kugadzirisa nekukudziridza zviitiko zvinoenderana nazvo kuti uzvigadzirise.
Iwe uri simba rako uye zvechokwadi uine mhando dzehunyanzvi uye kugona zvinokugadzika kure kubva kune vamwe. Ndiri kutaura pamusoro pesimba rako, izvo hunhu uye zvinhu zvinobuda mukati hunhu hwako uye zvakare mune yako nyanzvi mhedzisiro. Saka, iwe watoziva kare kuti kusiyana uku kuri chii? Unoziva kwaunogara kwakanaka here ..? Zvimwe iwe uri mune technical technical, mukuita sarudzo kana mune kutaurirana kana kushamwaridzana pakati pemabasa.
Tsvaga kwaunopatsanurwa uye ndeapi hunyanzvi ari hunyanzvi hwako kugona uye shandira kusimbisa nekuvandudza izvi zuva rega rega. Tora mukana wako mumakambani uye shandisa ruzivo rwako kuchinjanisa uye kuunganidza zviitiko uye kugara uchivandudza kwako-kuziva.
Nyika nemakambani zviri kuchinja nekukurumidza nekukurumidza. Mupfungwa iyi, zvinogona kuti izvo zvawakadzidza makore mashanu kana gumi apfuura zvakatopera uye zvakapera nhasi. Naizvozvo, kuisa mari mukudzidziswa, hunyanzvi hwekutarisira, kuverenga, Ruzivo, uye networking pane chiri kuenderera mberi chakakosha kuitira kuti idzi dura, dzemari nenguva, zvikubatsire kukudziridza hunyanzvi nyowani uye kugona uye zvakare kuwedzera pfungwa dzako zvine chekuita nebasa rako nebhizinesi rako nemaonero enyika.
4.Gadzira hukama hwakanaka hwekuyanana
Izvi, sezvandataura, ndizvo mukati mehunyanzvi hwevanhu hwakakosha kune wese nyanzvi ingave iri mukutungamira kana mune imwe nharaunda, nekuti kunyangwe kana munhu aine hushoma hwekudyidzana nevamwe pabasa rake, kunaka kwekudyidzana kwake kunoita mutsauko wese muchimiro chehukama hwavo.
Nekudaro, zvakakosha kwazvo kuti utsvage kukurira zvinorerutsa zvinotenda pamusoro pevanhu uye kudzivisa kuparadza uye hunhu husina kunaka sekusavimbika, kusagadzikika, kutsamwa, uye makuhwa munzvimbo yako yebasa. Izvi zvakakosha kuti iwe uvake kwakawanda kuwirirana pakati pehupenyu hwako hwezuva nezuva, kukwanisa kutaurirana kune vaunoshanda navo, vatengi, uye vatungamiriri zvinobudirira uye kuti vawane kudyidzana kwavo uye nekuvimbana pamwe.
Mupfungwa iyi, kubva ku0 kuenda ku10, iro giredhi unopa kune kunaka kwese kwekubatidzana kwako kubasa nhasi?. Funga nezvehukama hwako hwehukama, funga nezvekwaunogona uye hwaunofanira kugadzirisa; bvunza mhinduro kubva kune vako vatungamiriri kana vepedyo vaunoshanda navo uye gara uchivavarira kubuda munzvimbo ino.
5.Kuvaka Chirongwa Chirongwa
Paunokudziridza kugona kuona kure uye kuwona zvisingaonekwi neumwe munhu, mikana yako yekushandisa zvakanyanya mikana uye kubvisa kutyisidzira nekukurumidza inonyanya kukura. Nekuti izvi, kukudziridza yako kuona kwezvakakosha kunokosha, nekuti uku ndiko kugona kunoita kuti iwe uwedzere kuona kwako kwekambani, musika uye vanhu, ita sarudzo dzakasununguka uye uite zvakabatana.
Kune izvi, zvakakosha kuti gara uchiwirirana nenyanzvi muchikamu chako uye munzvimbo dzakasiyana. Saka, semuenzaniso, teerera kune nhau, musika uye zvemagariro, zvehupfumi, zvematongerwo enyika, zvehunyanzvi uye shanduko yepasirese. Zvese izvi zvinobatsira kuwedzera zivo yako uye kuunza maonero matsva uye mukana kune rako basa uye kune yako kambani.
6.Shingairira Kutaurirana Kwako
Kuve nekutaurirana kwakanaka chakakosha chinhu mukubudirira kwevatariri vevashandi uye nekune dzimwe nzvimbo dzese. Ive yakanyorwa, pamwe chete nemazwi, kana muviri. Nekudaro, kudivi rakanaka, mataudzirwo atinotiudza zvakawanda nezvehukama hwedu hwevanhu, kufunga kwedu, kunzwa, uye kuita, uye mhedzisiro yatinosvika pari zvino.
Naizvozvo, zvakajeka uye zvakanyanya kutaurirana kutaurirana, zviri nani kugoverwa kwemabasa; iyo feedbacks, nzira yekutaurirana nevatengi uye vatengesi; nzwisiso nechikwata panguva yekuita chirongwa pamwe, kuchinjana kwezviitiko uye ruzivo nevashandi pamwe, iyo ruzivo rwakatumirwa uye kuchinjaniswa kuburikidza maemail uye mishumo uye kutaurirana pakati pevanhu.
So kana iwe uchitsvaga kutaurirana zviri nani uye nekusimbisa, tanga nekuongorora mazwi aunoshandisa; toni yako yezwi kana uchireva munhu kana kutaura pamusoro penyaya yakati uye ongorora kuti chimiro ichi chiri kubatsira here kana kuti chiri kukanganisa izvo zvinonzwisisika. Kana zvirizvo, tsvaga kunatsa uye kupinza hunyanzvi hwako hwekushamwaridzana uye shandisa yako kutaurirana kunyanya kuchenjera.
7.Cherechedza Mudzidzisi uye Wedzera Zvaunowana
Kudzidzisa ndeimwe yeanovimbisa uye humane humwari mabasa epanyika nekuti iwe uchiri Tsigira mumwe munhu mukukura kwavo kwehunyanzvi kana kunyangwe mukukura kwavo pachako, iwe zvakare une mukana wekudzidza, kukura uye kuwedzera ruzivo rwavo nazvo. Nekudaro, nekuwedzera pakudzidza kuvandudza uye nekumhanyisa mhedzisiro yevamwe, semurairidzi iwewe zvakare dzidza maitiro ekuwedzera kubudirira kwako.
Mupfungwa iyi, nyanzvi yeku maneja anogona kushandisa zvakanakira zveKudzidzisa kudzidzisa mashandiro ake pakambani, kuvandudza mataudzirwo ake, mhinduro yake, hukama hwake pakati, kugona kuronga uye kubata nguva, pamwe nekuvandudza hunyanzvi hwake hutungamiriri, hwemagariro uye kuronga.
Heano nzira mbiri: yekutanga ndiyo mukana wekuzvirovedza wega uye kuita semudzidzisi wemukati, uchitora hunyanzvi hwako uye tsika yekudzidzira kukambani yako nevashandi vari chikamu chayo. Iyo imwe ndeyekuwedzera iwe ruzivo rwemanejimendi kune ruzivo rwekudzidzisa uye kuita hunyanzvi mune izvi basa rekuita, kubatsira uye kutsigira nyanzvi, vatungamiriri uye masangano mukushanduka kwavo uye mune inoshanda uye inokurumidza kusvitsa kwezvinangwa zvavo nezvinangwa zvavo.
Ona kuti zvinoita sei kuvandudza nekunatsa hunyanzvi hwomutariri? Ndinovimba matipi aya pamusoro kukubatsira kuwedzera pfungwa dzako maererano nezvamungagone kuita pamwe neicho chinogona kushanda zvigadzirwa zvekuvandudza uye kuwedzera ruzivo rwehunyanzvi, rwevanhu, uye rwechokwadi matarenda nehunyanzvi kuburikidza Kuenderera mberi kwekutsvaga mari muhutano hwako uye kubudirira kwako. Kana iwe uchida kukurumidza kubudirira kwako, yeuka kuti coaching iri pano kuti ikutsigire kuti uwane migumisiro yako inoshamisa.
Zoe Talent Solutions - Kupa Simba Upenyu
Zoe inotorwa kubva mushoko reChigiriki rehupenyu, uye izvi zvinobva muZOE Talent Solutions 'bhizinesi chinangwa chekubatsira vatengi kuwana hupenyu hwakazadzikiswa. Iine vanopfuura 40 vanopa mazano uye vanopfuura mitauro ye20, ZOE ine mahofisi munyika ina uye yakapa kudzidzisa kune vatengi pasi rese. mune yakazvimirira, yeruzhinji-yakazvimirira uye yemagariro zvikamu. Maumbirwo echikwata paZOE akagadzirirwa kuona kuti vatengi vanogona kugamuchira timu yakakodzera ine ruzivo rwakakwana uye hunyanzvi chero kupi zvako munyika.
Kuti unzwisise zvizere mamiriro ese emutengi, mamiriro akasimba uye macroeconomic, zvinotariswa zvinowanzoshandiswa paZOE kusimudzira ruzivo, kuve nechokwadi kuti misika, maitiro uye zvakanakisa maitiro zvinodzidziswa uye ruzivo rwasvika ikozvino. Izvi zvichabatsira varairidzi kusvika Chiono neMishinari yakagadziriswa neZOE.
Kupa simba masangano kuburikidza nehunyanzvi hwevanhu, nekupa kwakanyanya kunaka maitiro ekudzidziswa uye kubvunza mhinduro yakagadzirirwa kune yavo kuda kuvabatsira kuwana hunhu mubhizinesi ravo.
Kubatsira vatengi vedu netarenda rekutonga matarenda ayo anozorodza mashandiro anoita vanhu vawo kuwana budiriro mumwe nemumwe uye kune yavo sangano.
Kudzidziswa kunogona kupihwa sekuvhurwa kwakarongwa misi, iri-mumba kudzidziswa uye eLearning. Yakanunurwa mukati nzira dzinoverengeka kuitira kuti uwedzere kubatsirwa. Sokutaura kwakaita Aristotle, "Nezvinhu zvatinofanira kudzidza tisati tazviita, tinodzidza nekuzviita."
Mharidzo, mavhidhiyo uye kurekodi mavhidhiyo
Dubai City Kambani, kazhinji kutaura, ichipa rubatsiro uye zano. Uyezve, nhungamiro dzakanaka dzeBasa muDubai. Dare redu rakasarudza kuwedzera ruzivo rwemutauro mumwe nomumwe wedu Jobs in Dubai Guides. Saka, mune izvi mupfungwa, iwe zvino unogona kuwana mazano, mazano uye basa muUnited Emirates nemutauro wako.